Dr. Tint Swe's Writings: Hypertension Links သွေးတိုးစာများ
၁။ မင်္ဂလာပါ ခဏခဏမေးသမျှဖြေပေးလို့ကျေးဇူးပါ။ ကျနော့် အသက်၃၇ ကျား အိမ်ထောင်ရှပါတယ်ဒ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ထဲက သွေးပေါင်ချိန်ရင် အပေါ် ၁၃၀ အောက် ၈၀အမြဲလိုလိုပါပဲ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ရက်လောက်က မျက်နှာရဲပြီး လေးနေလို့ ဆေးခန်းပြေးပါတယ်။ သွေးပေါင်၁၆၀-၁၁၀ ပါဆရာ။ ဆေးခန်းက ၁၀ရက်စာ ဆေးပေးပြီး ဆေးကုန်မှ ပြန်ပြခိုင်းပါတယ်။ ဆေးသောက်ပြီး ၃ရက်ကြာ အခုအပြင်ဆေးခန်းမှာချိန်တော့ ၁၀၀-၇၀ ဖြစ်နေတယ်။ လူအရမ်းနှုံးနေပါတယ်။ ဆေးခန်းပြန်ပြဖို့ဝေးနေလို့ ဆေးဆက်သောက်သင့် မသင့်အကြံပေးပါအုန်းဆရာ။ ဆရာကျန်းမာပါစေ။ အပြင်ဆေးဆိုင်မှာချိန်တာပါ ဆရာ။
သွေးတိုးစာတွေ ခဏခဏတင်တယ်။ သွေးတိုးဂဏန်းဆိုတာ မိနစ်-နာရီအလိုက်ပြောင်းနေတယ်။ ဘလော့မှာ စာတွေရှိပါတယ်။
၂။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ကျား၊ အသက်က ၃၅ နှစ်ပါခင်ဗျ။ မျိုးရိုးသွေးတိုးရှိပါတယ်။ ကျနော် သွေးတိုးရှိခဲ့တာ ၁၀နှစ်ရှိပါပြီ။ အခု ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်ဆေးသောက်နေပါတယ်။ 10mg amlodipine ပါ။ အရင်က သွေးတိုးကျဆေးစွဲမသောက်ခဲ့ပါ။ တခါတရံသွေးတက်တဲ့အခါ paracetamol သောက်ရင် သက်သာပါတယ်။ သွေးတိုးသမားတွေဟာ ရေအေးနဲ့ ချိုးသင့်သလား ဒါမှမဟုက် ရေနွေးနဲ့ ချိုးသင့်သလား။ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးသိပါရစေခင်ဗျာ လေးစားစွာဖြင့်။
ခဏခဏ (ခဏခဏ) ရေးပါတယ်။ သွေးတိုးဆိုရင် အထက်ဂဏန်းနဲ့ အောက်ဂဏန်း ၂ မျိုးလုံးသိဘို့လိုတယ်။ ဒုတိယမေးခွန်းပါ ပါရာစီတမောနဲ့ သွေးတိုး မဆိုင်ပါ။ အဲဒီဆေးက အနာ-အကိုက်-အဖျား ကျပါမယ်။ သွေးဖိအားကို မကျစေပါ။ နေရထိုင်ရသက်သာတာနဲ့ သွေးဖိအားကျတာ တူချင်မှ တူတယ်။ တိုင်းကြည့်မှသာ ကျတယ် တက်တယ် သိပါမယ်။ ပေါင်ချိန် မဟုတ်ကြောင်းလည်း ခဏခဏ (ခဏခဏ) ရေးထားပါတယ်။
3. Digital blood pressure monitors သွေးဖိအားတိုင်းကရိယာ ကန်တော့ချင်လို့ပါ http://doctortintswe.blogspot.com/2015/10/digital-blood-pressure-monitors.html
4. High blood pressure သွေးတိုးအမေး http://doctortintswe.blogspot.com/2016/03/high-blood-pressure-question.html
5. Home Blood Pressure Monitors သွေးဖိအားတိုင်းကရိယာတွေ မမှန်တတ်ပါ https://doctortintswe.blogspot.com/2017/06/home-blood-pressure-monitors.html
6. Hypertension (1) သွေးတိုးရောဂါ (၁) http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hypertension-1.html
7. Hypertension (2) သွေးတိုးရောဂါ (၂) https://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/hypertension-2.html
8. Hypertension Question သွေးတိုးမေးခွန်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/05/high-blood-pressure.html
9. Ischemic Heart Disease နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/ischemic-heart-disease.html
10. Medicines for High Blood Pressure သွေးတိုးဆေးများ http://doctortintswe.blogspot.com/2014/12/medicines-for-high-blood-pressure.html
11. Stroke Emergency Treatment ဆထုပ် အရေးပေါ်ကုသခြင်း https://doctortintswe.blogspot.com/2015/12/stroke-emergency-treatment.html
12. Stroke ဦးနှောက်သွေးကြော ဖောင်းပြီးပေါက်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2015/07/stroke.html
13. Stroke ဦးနှောက်သွေးကြောမတော်တဆဖြစ်ခြင်း http://doctortintswe.blogspot.com/2014/11/stroke_22.html
14. Stroke လေဖြတ်ရင် http://doctortintswe.blogspot.com/2015/04/stroke.html